I-Quebec yase-Canada iveza intela entsha yabangagonyiwe
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » ICanada Breaking News » I-Quebec yase-Canada iveza intela entsha yabangagonyiwe
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • ICanada Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
UNdunankulu wesifundazwe saseCanada saseQuebec, uFrançois Legault
Njengoba ukulaliswa esibhedlela kwe-COVID-19 kukhuphuka phakathi nokusabalala okusheshayo kokuhluka kwe-Omicron, iQuebec izodinga abasebenzi basesibhedlela abayi-1,000 1,500 nabasebenzi basemakhaya asebekhulile abayi-XNUMX emasontweni ambalwa ezayo, kusho uLegault.
UNdunankulu wesifundazwe saseCanada saseQuebec, UFrançois Legault, namuhla ufunge ukuthi uzokhipha inhlawulo entsha yezimali, ethi labo abakwaQuébécois abenqaba ukuthola umthamo wabo wokuqala wokugoma emasontweni azayo kuzodingeka baqale ukukhokhela umthelela wabo ohlelweni lokunakekelwa kwezempilo.
"Njengamanje, umbuzo futhi mayelana nokungenzeleli ku-90% wabantu abazidela okuthile," I-Legalult kusho. "Ngicabanga ukuthi sibakweleta lolu hlobo lwesilinganiso."
Okusanda kuvimbela ama-anti-vaxxer angafakwanga ukungena ezitolo zotshwala nezitolo zensangu, Quebec yethula intela entsha yezempilo kulabo abenqaba ukugonyelwa i-coronavirus.
Ebuzwa ngezinselelo zomthetho nezokuziphatha uhulumeni okungenzeka abhekane nazo mayelana nentela engakaze ibonwe, uNdunankulu uvumile ukuthi lesi sinyathelo "sisikhulu."
I-Legalult yathi: “Uma ubheka okwenzeka kwamanye amazwe noma kwezinye izifundazwe, wonke umuntu uzama ukuthola ikhambi. Kungumbuzo wokulingana ngoba njengamanje, laba bantu, babeka umthwalo obaluleke kakhulu kunethiwekhi yethu yokunakekelwa kwezempilo, futhi ngicabanga ukuthi kujwayelekile ukuthi iningi labantu libuze ukuthi kube nomphumela. ”
Quebec UNdunankulu akazange adalule inani lentela entsha. Uthe isifundazwe sizoqhubeka nokwandisa ukusetshenziswa kwezidingo zamaphasiphothi okugoma esifundazweni, kodwa wathi “kufanele siqhubekele phambili” kunokuvala izakhamizi ezingagonyiwe ezindaweni zomphakathi.
Igunya lokugunyazwa lokungena ngemvume lanwetshwa ezitolo zotshwala nensangu ngesonto eledlule ngemuva koku-odwa ngaphambilini ukuthi kungene izindawo ezifana nezindawo zokudlela, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, amabha kanye namakhasino.
Njengoba ukulaliswa esibhedlela kwe-COVID-19 kukhuphuka phakathi nokusabalala okusheshayo kokuhluka kwe-Omicron, Quebec bazodinga abanye abasebenzi basesibhedlela abayinkulungwane kanye nabasebenzi basemakhaya asebekhulile abayi-1,000 1,500 emasontweni ambalwa ezayo, kusho uLegault.
Quebec kubikwe ukuthi kushone abantu abangu-62 ngenxa ye-COVID-19 ngoLwesibili, iningi labo kusukela ngoJanuwari 2021, ngaphambi kokuthi kuqale ukukhishwa kwemithi yokugoma esifundazweni.
Akex Semiletow uthi:
Januwari 12, 2022 ngo-14: 15
Kuhle ukubona usopolitiki enomthamo ofanele wesibindi. Ubulungisa busebenza ngezindlela ezimbili futhi inkululeko yomuntu iphelela lapho iqala khona ukungena ezindabeni zomunye umuntu…